Women’s Talk – အတ္တကျော်ရဲ့ စာပေါင်းစုံ
မိတ်ဆွေတစ်ယောက်ဆီက လက်ဆင့်ကမ်းလာတဲ့ ကြော်ငြာလေးတစ်ခု ဓာတ်ချောစာကနေ ဝင်လာတယ်။
ဖတ်ကြည့်လိုက်တော့ နိုင်ငံတကာ အစိုးရမဟုတ်တဲ့ အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုက ကမကထလုပ်ပြီး ကျင်းပမယ့် “အမျိုးသမီးများရဲ့ စကားဝိုင်း” အစီအစဉ်ပါတဲ့။
အဲဒီ့အစီအစဉ်မှာ ပြောမယ့်သူတစ်ယောက်ကြောင့် ကျွန်တော် မျက်လုံးပြူးသွားရပါတယ်။ သူကတော့ ဗြိတိသျှ ရုပ်ရှင်မင်းသမီး အကျော်အမော် အယ်မာ ထော(မ်)ဆင်(န်) ဖြစ်နေပါတယ်။ သူ့ နာမည် မြင်လိုက်တာနဲ့ ခေါင်းထဲမှာ ပေါ်လာတာက “ဂျိန်း အော် စထင်(န်)” ရဲ့ ဂန္ထဝင်ဝတ္ထုကြီးဖြစ်တဲ့ Sense and Sensibility ပါပဲ။ အဲဒီ့ဝတ္ထုကို ရုပ်ရှင်ဇာတ်ညွှန်းအဖြစ် သည်မင်းသမီးကိုယ်တိုင်က ရေးသားခဲ့ပြီး ကိုယ်တိုင်လည်း ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ဖူးပါတယ်။
အဲဒီ့ဇာတ်ကားအတွက် အကောင်းဆုံး ဇာတ်ညွှန်း အော်စကာဆုကို သူက ဆွတ်ခူးရရှိခဲ့တဲ့အပြင် အော်စကာဆုမဟုတ်ပေမယ့် BAFTA လို့ လူသိများတဲ့ “ရုပ်ရှင်နဲ့ ရုပ်မြင်သံကြား အနုပညာ ဗြိတိသျှ အကယ်ဒမီ“က ချီးမြှင့်တဲ့ အကောင်းဆုံး အမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်ဆုကိုလည်း အဲဒီ့ကားနဲ့ပဲ ရခဲ့ပါသေးတယ်။ ဟယ်ရီပေါ်တာ ဇာတ်လမ်းတွဲတွေမှာလည်း ပါဝင် သရုပ်ဆောင်ခဲ့သူ ဖြစ်သလို Howards End ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားနဲ့လည်း အကောင်းဆုံးအမျိုးသမီး သရုပ်ဆောင် အော်စကာဆု ရရှိထားသူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ တိုတိုပြောရရင် အောင်မြင်ထင်ရှားတဲ့ ကမ္ဘာကျော် ရုပ်ရှင်မင်းသမီးပေါ့။
အဲဒီ့မင်းသမီးက သည်အခမ်းအနားမှာ စကားပြောမယ်ဆိုတော့ ကျွန်တော်လည်း အလွန်စိတ်ဝင်စားသွားတယ်။ ကမ္ဘာကျော် မင်းသမီး တစ်ယောက်ကို အပြင်မှာ မြင်ဖူးဖို့ဆိုတာ အိပ်မက်တောင် မမက်ဖူးတာမျိုးပါ။ အခုတော့ ကိုယ့်တိုင်းပြည်ထဲကလည်း တစ်လက်မမှ မထွက်ရဘဲ သူလို မင်းသမီးကို မြင်တွေ့နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးမို့ လက်လွတ်မခံတော့ဘဲ သက်ဆိုင်တဲ့ တာဝန်ခံဆီကို ဖိတ်စာပို့ပေးဖို့ ဓာတ်ချောစာနဲ့ပဲ လှမ်း မေတ္တာရပ်ခံလိုက်ပါတော့တယ်။
ဟိုကလည်း မဆိုင်းမတွဘဲ အကြောင်းပြန်တယ်။ နေရာအခက်အခဲကြောင့် ဖိတ်စာကန့်သတ်ထားကြောင်းနဲ့ ဖိတ်စာတွေ အဆင်သင့်ဖြစ်ရင် ကျွန်တော်တို့ ဇနီးမောင်နှံအတွက် ပို့ပေးပါ့မယ်တဲ့။ သည်လိုနဲ့ ဖိတ်စာကလည်း အင်တာနက်ကတစ်ဆင့်ပဲ ရလာတယ်။ ဖိတ်စာကို ပုံနှိပ်ပြီး ယူလာခဲ့ပေးပါလို့လည်း မှာပါသေးတယ်။
သည်လိုနဲ့ ၂၀၁၁ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၁၅ ရက် စနေနေ့မှာ အဲဒီ့အခမ်းအနားကို တက်ရောက်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ့ အခမ်းအနားက နေ့ခင်း ၃ နာရီမှာ စမှာ။ ၃ နာရီအတိမှာ စချင်တဲ့အတွက် ၂ နာရီ ၄၅ မတိုင်ခင် အရောက်လာပြီး နေရာယူပေးဖို့လည်း ဖိတ်စာမှာ နှိုးဆော်ထားတယ်။ ဖြစ်ချင်တော့ အဲဒီ့နေ့ နေ့လည် တစ်နာရီက သုံးနာရီအတွင်း ကန်တော်ကြီးစောင်းက ဟိုတယ်ကြီးတစ်ခုမှာ ကျင်းပမယ့် မင်္ဂလာအခမ်း အနားအတွက် အခမ်းအနားမှူး လုပ်ပေးဖို့ ကျွန်တော်က လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်လလောက်ကတည်းက လက်ခံထားမိနေတယ်။ အချိန်က နည်းနည်း ကသီလင်တဖြစ်ချင်စရာပေါ့။
တကယ်လည်း ကသီပါတယ်။ မင်္ဂလာဆောင်က ပြန်ထွက်လာတော့ ၂ နာရီ ၁၅ မိနစ်ရှိနေပြီ။ ဖြစ်ချင်တော့ ကျွန်တော့်ကားရှေ့မှာ တခြား ကားတစ်စီးက ပိတ်ရပ်သွားလို့ အဲဒီ့ကားရှင်ကို ရှာရတာနဲ့ အချိန်က ပိုကြာသွားတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ကဆုန်စိုင်းပြီး အိမ်ပြန်ပြေးရသေးတယ်။ အဝတ်ပြန်လဲရသေးတာပ။ ပွဲထိုင် အဝတ်ကြီးနဲ့ လန်းလန်းလန်းလန်း လုပ်ပြီး သွားဖို့မှ မတော်ဘဲလေ။
သည်လိုနဲ့ ၂ နာရီ ၄၅မိနစ်အတိမှာပဲ “အမျိုးသမီးများရဲ့ စကားဝိုင်း“ ကျင်းပမယ့် ရွှေတောင်ကြားထဲက ဩစတြေးလျသံရုံးရဲ့ အပမ်းဖြေရိပ်သာကို ရောက်သွားပါတယ်။ စိတ်ထဲမှာ သံသယတစ်ခုက ရှိနေသေးတယ်။ သူတို့ကသာ အယ်မာ ထော်(မ်)ဆင်(န်) ပြောမယ်လို့ ပြောတာ။ လူကိုယ်တိုင် မဟုတ်ဘဲ ရုပ်မြင်သံကြားကတစ်ဆင့် ပြောရင်လည်း ဖြစ်နိုင်နေတာပဲလို့ တွေးမိနေရတာပါ။
ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် ရောက်ပြီး မကြာခင်မှာပဲ မင်းသမီးကြီး ဝင်လာတာတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ အသက် ၅၃ နှစ်အရွယ်ရောက်နေပြီဖြစ်တဲ့ မင်းသမီးကြီးက ချောမောတင့်တယ်လှပါတယ်။ သူနဲ့အတူ ပြောမယ့်သူတွေက အငြိမ်းစား ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ ဒေါ်မြင့်မြင့်ခင်၊ စာရေးဆရာမ ဂျူးနဲ့ တေးသံရှင် ဖြူဖြူကျော်သိန်းတို့လည်း ပါပါတယ်။ ကျွန်တော့် ကင်မရာက မနားတော့ပါဘူး။
အခမ်းအနားကို သုံးနာရီတိတိမှာ စလိုက်ကြပါတယ်။ စုစုပေါင်း လူ ၇၀ စာ ထိုင်ခုံချထားပြီး ထိုင်ခုံ အားလုံးနီးပါး ပြည့်ပါတယ်။ အများစုက အမျိုးသမီးတွေပါ။ အမျိုးသားရယ်လို့ ဆယ်ယောက်မပြည့်ပါဘူး။ အဖွင့်အမှာစကားကို မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဩစတြးလျ သံအမတ် အမျိုးသမီးကြီးက ပြောတယ်။ သူ့နောက်မှာ ကမကထပြုတဲ့ Action Aid အဖွဲ့အစည်းက အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်က ပြောပါတယ်။ အဲဒီ့နောက် ဒေါက်တာ ဒေါ်မြင့်မြင့်ခင်က မြန်မာနိုင်ငံက အမျိုးသမီးများရဲ့ အနေအထားကို ပုဂံခေတ်က အစချီကာ ပြောပါတယ်။ အသံချဲ့စက်မပါတဲ့ အခမ်းအနားမို့ တိုးတိုးသက်သာ ပြောတဲ့ ဆရာမကြီး အသံကို အတော် နားစိုက်ထောင်ရပါတယ်။ ဆရာမကြီးက အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ပဲပြောတာပါ။
နောက် ဆရာမဂျူးအလှည့်ပါ။ ကျွန်တော်နဲ့အတူ မော်လမြိုင်မှာ ဟောတုန်းကထက် သည်မှာ ဒေါ်ဂျူးကပိုပြီး သွက်လက်နေတယ်။ မိန်းကလေးဆိုရင် ဘယ်ကဲ့သို့ ဘယ်ချမ်းသာဆိုပြီး ပုံသေကားချ သတ်မှတ်ချင်ကြတဲ့ သဘောထားကို ပယ်သင့်တဲ့အကြောင်းကို သူက ဆွေးနွေးသွားတာပါ။ သူ့မိခင် ဖခင်တို့ရဲ့ အိမ်ထောင်ရေးဘဝ၊ မိသားစုဘဝကို နမူနာလေးနဲ့ ပုံဖော်သွားတာက စိတ်ဝင်စားဖွယ်၊ နှစ်လိုဖွယ်ပါပဲ။
နောက်တစ်ယောက်က ဖြူဖြူကျော်သိန်းဖြစ်ပါတယ်။ သူကလည်း အင်္ဂလိပ်လိုပဲ ပြောပြန်ပါတယ်။ ရော့(ခ်)အဆိုတော် တစ်ယောက်အဖြစ် သူ လျှောက်လှမ်းခဲ့ရတဲ့ လမ်းကြောင်းလေးနဲ့ အစချီပြီး အမျိုးသမီးများရဲ့ အနာဂတ်အတွက် အခြေခံအကျဆုံးကတော့ ပညာရေးသာ ဖြစ်ကြောင်း သူကလည်း ချက်ချက်ချာချာ ပြောသွားတယ်။
လာပါပြီ။ ကမ္ဘာကျော်မင်းသမီးကြီး။ သည်မင်းသမီးကြီးရဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်တွေထဲမှာ သရုပ်ဆောင်မင်းသမီး၊ ဟာသပညာရှင်၊ ဇာတ်ညွှန်းဆရာမ ဆိုတဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်သုံးရပ်က တွဲနေပါတယ်။ ဟာသပညာရှင်ပြီပြီ သူ စဝင်လာကတည်းက ပရိသတ်က တသောသောနဲ့ ရယ်မောနေကြရရအောင် ဟန် မာန်အပြည့်နဲ့ လှုပ်လှုပ်ရှားရှား ပြောသွားပါတယ်။ ဟောစင်နောက်မှာ တောင့်တောင့်ကြီး ရပ်ပြီး ဟောပြောတာကို ဘယ်တုန်းကမှ မကြိုက်တတ်သလို ကိုယ်တိုင်လည်း တစ်ခါမှ မလုပ်ဖူးတဲ့ ကျွန်တော့်အတွက်တော့ အယ်မာ့ ပြောပုံ ဆိုလက်နဲ့ ဟန်အမူအရာတွေ၊ အလှုပ်အခတ်တွေက စွဲမက်စရာ ကောင်းနေပါတယ်။ မင်းသမီးပီပီ မျက်နှာထား၊ အသံနေ အသံထားနဲ့ မင်မောင်းကလည်း အလွန်ကောင်းလှပါတယ်။
သူကလည်း သူဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ ဘဝ၊ သူရောက်ခဲ့တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ အပူပိုင်းဒေသမှာ တွေ့ခဲ့ရတဲ့ မိန်းကလေးတွေရဲ့ ဘဝများနဲ့ အစချီရင်း မိန်းမကောင်းဆိုတာ ဘယ်ကဲ့သို့ ဘယ်ချမ်းသာဆိုတဲ့ ခေါက်ရိုးအထပ်ထပ် အချိုးခံပြီး ပုံစံခွက်ထဲ အသွပ်ခံရပုံများကို ပြောသွားပါတယ်။ အဲဒီ့ အစဉ်အလာ အရိုးစွဲအတွေးအမြင်တွေ ပပျောက်အောင် ဆောင်ရွက်ဖို့က လူတိုင်းမှာ တာဝန်ရှိကြောင်းပေါ့။
အားလုံးခြုံလိုက်ရင် စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းတဲ့ အစီအစဉ်လေးပါပဲ။ ဟောပြောသူတွေကလည်း တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ငဲ့ပြီး အချိန်တွေ အများကြီး ယူမသွားဘဲ တိုတိုကျဉ်းကျဉ်းနဲ့ ထိထိမိမိ ပြောသွားကြတာမို့ ကျစ်ကျစ်လစ်လစ် ရှိပါတယ်။ ဒါတောင် အခမ်းအနားပြီးတော့ ငါးနာရီ ထိုးခါနီးနေပါပြီ။ အချိန်ကို ငဲ့ရတာမို့ မူလ အစီအစဉ်အတိုင်း ပရိသတ်ရဲ့ မေးခွန်းတွေကို ဖြေကြားမယ့် အစီအစဉ်ကို ပယ်ဖျက်လိုက်ကြပါတယ်။
ကျွန်တော့်အတွက် နည်းနည်း စိတ်ကသိကအောက်ဖြစ်ဖို့ ကောင်းသွားတာကတော့ အဲဒီ့က တာဝန်ရှိသူ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်က ပွဲအလယ်မှာ ကျွန်တော့်ကို သိပ် လမ်းမသလားပါနဲ့လို့ သူ့နားက အဖြတ်မှာ ပြောတာပါပဲ။ လမ်းသလားတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဓာတ်ပုံရိုက်နေတဲ့အတွက် သွားလာလှုပ် ရှားနေရတာပါလို့ ကျွန်တော် ပြောပေမယ့် သူက ဇွတ်ပြောနေပါတယ်။ နိုင်ငံခြားသူတစ်ယောက်ပါ။ စိတ်ထဲမှာ အလွန်မျက်သွားပါတယ်။ အဲဒီ့ပွဲမှာ နိုင်ငံခြားသား လူငယ် ဓာတ်ပုံဆရာတစ်ယောက်၊ မြန်မာ အမျိုးသမီး ဓာတ်ပုံဆရာမတစ်ယောက်နဲ့ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ မြန်မာတစ်ယောက်တို့လည်း ဓာတ်ပုံရိုက်နေကြပါတယ်။ သူတို့ဆိုရင် ပရိသတ်အားလုံးရဲ့ ရှေ့ကနေ မတ်တတ်ရပ်ပြီး ရိုက်ကြတာတွေတောင် ပါသေးတယ်။ ကျွန်တော်ကမှ ဘေးဘက်က ရိုက်တာပါ။ ဆရာမကြီး ဒေါ်မြင့်မြင့်ခင် ပြောနေတုန်းမှာသာ ဆရာမကြီးက ထိုင်ရာက မထဘဲ ပြောတာမို့ အလယ် မင်းလမ်းက သွားရိုက်ရပါတယ်။
ကျွန်တော်ကိုင်တဲ့ ကင်မရာကလည်း အပျော်တမ်း ကင်မရာဆိုပေမယ့် ကချော်ကချွတ်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ အငယ်တမ်း ပညာရှင်သုံး ကင်မရာမျိုးပါ။ တစ်ခုတော့ ရှိသပေါ့။ ကျွန်တော်က ဓာတ်ပုံရိုက်ရင် ဖြည့်စွက်မီးကို သုံးခဲတယ်။ သဘာဝ အလင်းရောင်နဲ့ ရိုက်တဲ့ အကျင့်ရှိတယ်။ မီးခွက်ကြီး တပ်ဆင်မထားတဲ့ ကင်မရာမို့ သူက အထင်သေးသလားတော့ မသိဘူး။ ဓာတ်ပုံရိုက်နေသူ လေးယောက်အနက်မှာ ကျွန်တော့်တစ်ယောက်ကိုပဲ ကွက်ပြီး အဲလိုပြောတော့ စိတ်ထဲ အတော် မျက်သွားပါတယ်။ အခမ်းအနားကလည်း တန်းလန်းမို့ အကျယ်အကျယ် မငြိမ်းဖွယ် မဖြစ်ချင်လို့သာ ကျွန်တော် ရှောင်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ မဟုတ်လို့ကတော့ သူ့ကို ကောင်းကောင်း ပြန်ပြောဖြစ်သွားမှာ သေချာတယ်။
မြင်ရတွေ့ရခဲလှတဲ့ ကမ္ဘာကျော် မင်းသမီးကြီးကို အားပါးတရ တွေ့ရတာ၊ ဓာတ်ပုံတွေ ရိုက်ခွင့်ရလိုက်တာ၊ စကားပြောခွင့်ရလိုက်တာနဲ့ပဲ အဲဒီ့ အထစ်အငေါ့လေးကို ကျော်လွှားလိုက်နိုင်သွားပါတယ်။ ပွဲအပြီး လက်ဖက်ရည်ဝိုင်းမှာ မိတ်ဆွေတွေကို နှုတ်ဆက်ရင်း ဓာတ်ပုံပြပွဲကို ကြည့်ရပါတယ်။ အဲဒီ့ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံဝယ်ရင် အယ်မာ ထော(မ်)ဆင်(န်)ရဲ့ လက်မှတ်ပါတဲ့ ကပ်ခွာလေးတစ်ခု ရမှာမို့ ဓာတ်ပုံနှစ်ပုံ ဝယ်လိုက်ပါတယ်။
ပြီးတော့ အယ်မာနဲ့ ဓာတ်ပုံတွဲရိုက်ပေါ့ဗျာ။ မင်းသမီးကြီးကလည်း သဘောမနော ကောင်းစွာပဲ၊ လူတကာနဲ့ ဖက်လှဲတကင်း ဓာတ်ပုံအရိုက်ခံ ပေးတာမို့ ကြည်နူးစရာ ကောင်းပါတယ်။
အပြန်လမ်းမှာ ကျွန်တော့်အိမ်သူက ပြောပါတယ်။
ကျွန်တော်က သူ့စကား နောက်ကွယ်က အနက်ပွားကို ဆင်ခြင်မိရင်း ခေါင်းညိတ်ထောက်ခံလိုက်မိရပါတော့တယ်။
(ရန်ကုန် – ၁၆၁၀၁၁)
ကနေ့ (၂၀-၁၀-၁၁)ထုတ် Bi Weekly Eleven ဂျာနယ်ပါ စာတစ်ပုဒ်ကို ပြန်လည် တင်ဆက်လိုက်တာပါ။
Author lettwebawPosted on 20 October 2011 20 October 2011 Categories Information, Recounts, Reproduction
5 thoughts on “Women’s Talk”
Moe thida aye says:
21 October 2011 at 8:07 pm
It’s very interesting to know about it Sayar. Thanks for sharing it. I think you didn’t mention what Elmer Thompson talked about. I am sure there must be many good points.
I am not actually cleared what is the purpose of that ” women’s talk”. Is itasort ofawomen right’s awareness campaign?
Actually, I am also quite envious of you for havingachance to meet suchawoman of character.
This is my first time writing to you, pardon me if I make mistakes. To read your interesting posts is one reason I keep on logging into face book.
Thanks again sayar.
22 October 2011 at 7:37 am
Please can you share above woman talk’s radio file if you have. I want to listen. Most of myanmars staying foreign country depend on internet to know latest news. So I thanks you when you upload new posts and file or everythings.
3 November 2011 at 5:36 am
ဒီတော့ပစ်နဲ့တော့မဆိုင်ပါဘူး။ကျွန်မသိချင်တာက ကျွန်မတို့မြန်မာမှာ Rite of Passage ဆိုတာရှိပါသလားဆရာ။
3 November 2011 at 9:12 am
Rite of passage ဆိုတာ ဘ၀တစ်ခုကနေ တစ်ခုဆီ ကူးပြောင်းတဲ့ စပ်ကူးမပ်ကူးကာလကို ဆိုလိုပါတယ်။ ဥပမာ ကလေးဘ၀ကနေ လူပျိုပေါက်ဘ၀ကို ကူးပြောင်းတာ၊ အပျို၊ လူပျိုဘ၀ကနေ အိမ်ထောင်သည် ဘ၀ကို ကူးပြောင်းတာမျိုးပေါ့။ လူမျိုး အသီသီးမှာ အဲဒါတွေကို အခမ်းအနားနဲ့ လုပ်ကြတယ်။ မြန်မာ ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ ရှင်လိင်ပြန်တာ၊ ဒုလ္လဘ ရဟန်းဝတ်တာမျိုးဟာ ဘ၀မှတ်တိုင် (rite of passage) တွေပဲပေါ့။ ရှေးတုန်းက မိန်းကလေးတွေဆိုရင်လည်း အုပ်လုံးသိမ်းတာ၊ ဘာညာတွေ ရှိပါလိမ့်မယ်။ အခုခေတ်တော့ ဘရာစီယာ စ၀တ်တာက rite of passage များ ဖြစ်လေမလားပဲ။ ပထမဆုံးအကြိမ် မင်္ဂလာဆောင်တာ၊ အိမ်ထောင်ပြုတာဟာလည်းပဲ သည်ထဲမှာ အကြုံးဝင်ပါတယ်။ အရှည်ရေးစရာ လိုမယ် မထင်ပါဘူးခင်ဗျား။
4 November 2011 at 4:37 am
Previous Previous post: Inside-the-box Thinking
Next Next post: A smart dog andafoolish man